CBD FAQS - Andramo ny CBD mahomby
Anontanio Away ary raha manana ianao fanontaniana tsy voavaly eto izany, aza misalasala mifandray aminay
amin'ny 256-302-9824 na mailaka aminay amin'ny service@trytranquil.net.
CBD dia singa iray voajanahary amin'ny zavamaniry hemp. Izy io dia photocannabinoid tsy misy poizina izay manolotra fampiasa amin'ny vatana iray manontolo. Ny CBD dia iray monja amin'ireo fitokonambinoid am-polony sy fitokimiafika hafa hita ao amin'ny abaka.
Inona ny menaka CBD?
Ny menaka CBD dia avy amin'ny zavamaniry hemp izay manana cannabidiol (CBD) avo lenta ary ambany ny THC. Ny CBD mahitsy dia mamokatra menaka CBD kalitao tsara indrindra eto an-tsena, nalaina avy tamin'ny zavamaniry hemp mahasalama, namboly eto Etazonia.
Ahoana no fanamboarana ny solika CBD?
Ny hemp anay dia voamarina, nampitomboina ary nojinjaina tao amin'ny toeram-pambolen'ny tenanay tany Alabama sy Kentucky. Ao amin'ny Faran Tranquil dia mampiasa fitrandrahana éthanol cryo izahay mba hamokarana crude decarboxylated ririnina tanteraka, izay vao navadika ho distillate feno spektrum amin'ny alàlan'ny fomba fanadiovana mitarika (ie spd & wfd).
Inona no maha samy hafa ny hemp sy ny marijuana?
Ara-tsiantifika, ny hemp indostrialy sy ny marijuana dia zavamaniry iray ihany, miaraka amina karazana sy anarana hoe Cannabis sativa. Manana endrika miavaka génétique anefa izy ireo. ny mahazatra, hemp indostrialy dia marefo tokoa miaraka amin'ny tahony lava lava ary tsimoka voninkazo vitsivitsy. Ny zavamaniry marijuana dia matetika kely kokoa, bushier ary feno voninkazo. Na izany aza, ny karazana hemp indostrialy vaovao any Etazonia dia novolena hanana voninkazo bebe kokoa sy vokatra azo avy amin'ny cannabinoids sy terpenes, toy ny hemp Kentucky izay ampiasainay izao. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ny marijuana dia manana THC be dia be ary CBD ambany dia ambany. Hemp, etsy ankilany, mazàna dia manana CBD betsaka kokoa (amin'ny ankamaroan'ny tranga) ary ny habetsahan'ny THC ihany. Soa ihany, ny mombamomba ny cannabinoid amin'ny hemp dia mety ho an'ny olona mitady tombontsoa amin'ny rongony raha tsy misy ny "avo". Raha ara-tantara dia nampiasaina ny hemp hanamboarana vokatra sakafo, fibre, tady, taratasy, biriky, solika, plastika voajanahary ary maro hafa. Any Etazonia, ny rongony dia matetika ampiasaina amin'ny fialamboly na amin'ny fitsaboana. Ny teny hoe "menaka rongony" dia mety manondro marijuana na menaka azo avy amin'ny hemp, satria rongony sy rongony dia endrika rongony roa samy hafa. Ny menaka CBD mahitsy dia avy amin'ny hemp.
Ara-dalàna ve ny solika CBD?
Ny CBD avy amin'ny hemp dia misy manerana an'i Etazonia. Tamin'ny taona 2018, ny fanavaozana ny volavolan-dalàna momba ny fambolena amerikana dia nametraka ara-dalàna ny fambolena hemp araky ny lalàna voafaritra. Ny vokatra CBD mahomby dia nalaina avy amin'ny hemp indostrialy, CBD avo lenta ary mifanaraka amin'ny Total T. Manolotra am-pireharehana fandefasana maimaim-poana izahay, fihenam-bidy ho an'ny veterana, ary safidy lehibe amin'ny fividianana ambongadiny amin'ny vokatra rehetra.
Ahoana no fomba hitahirizako ny CBD-ko? Inona ny fiainana talantalana?
na ny fiainana talantalana tsara indrindra, ny vokatra Tranquil dia tokony hapetraka ao anaty hamandoana, faritra mangatsiatsiaka sy maizina lavitra ny tara-pahazavana mivantana. Hanampy amin'ny fitehirizana ny fananan'ny rongony hemp izany. Raha toa ka voatahiry tsara ny CBD dia mety haharitra 1 taona.
Tsy hahomby amin'ny fitsapana zava-mahadomelina ve aho raha mandray ny vokatra CBD?
Ny menaka CBD manara-penitra dia nalaina avy amin'ny hemp indostrialy natsangan'i Etazonia, ary mety misy ambaratonga THC ambanin'ny 0.3%. Ny CBD tranquil dia tsy manome antoka fa handalo ny efijeran'ny zava-mahadomelina ianao na handany ny vokatray. Mety hipoitra amin'ny fisavana zava-mahadomelina isan-karazany ny votoatin'ny THC.
Inona no fomba fampiasana tsara indrindra?
Ny vokatra CBD mahitsy dia misy amin'ny endriny maro karazana. Manolotra menaka CBD izahay izay tsotra, madio ary mandaitra ary lany amin'ny fametrahana tetezana eo ambanin'ny lela. Manolotra vokatra horonam-bokatra izahay, izay manome fampiharana tsy misy korontana sy mety, izay miasa tsara eny am-pandehanana ary ahafahanao mamantatra tsara izay tianao hitodihana ireo tombontsoa maharitra. Manolotra crème topical koa izahay, izay ampidirina solika, mety ary maharitra, sady manolotra karazan-tsoa amin'ny fahasalamana. Azafady mba jereo kely amin'ny alàlan'ny bilaoginay sy ireo pejin'ny vokatra isan-karazany mba hamaritana izay vokatra mety indrindra aminao sy amin'ny zavatra ilainao.
Hiakatra ambony ve aho?
Tsia. Ireo vokatra azo avy amin'ny hemp dia namboarina tamin'ny hemp indostrialy niaraka tamin'ny Haavo THC ambanin'ny 0.3%. Tsy misy vokany mahamamo amin'ny fakana ny vokatray.
Inona ny politika fandefasana Tranquil CBD?
Ny fandefasana any Etazonia dia $ 7.99 isaky ny baiko ary halefa amin'ny alàlan'ny FedEx amin'ny alàlan'ny fandefasana 48 ora. Ny fotoananay dia 2 andro fiasana. Azafady, avelao ny andro fiasana 4 handraisana ny kaominao. Tsy halefa any Idaho, Montana, na South Dakota izahay.
Ny fandefasana iraisam-pirenena dia $ 25.00 isaky ny baiko. Ny fanaterana matetika dia eo anelanelan'ny 7-21 andro vao tonga. Ny daty na ora fanaterana azo antoka dia tsy misy amin'ny fandefasana iraisam-pirenena.
Haharitra hafiriana ny fahazoana ny vokatro?
Mahazo ny vokatrao ao anatin'ny 3 ka hatramin'ny 4 andro fiasana ianao ho an'ny baiko any Etazonia. Ny baiko iraisam-pirenena matetika dia maharitra 7-21 andro fa tsy azo antoka.
Ny varotra rehetra novidiana tamin'ity tranonkala ity dia FINAL. Ny fandavana, na ny fangatahana Refund dia holavina.
Fanjakana izay tsy alefantsika any Etazonia
Noho ny lalàna federaly amerikana dia mandefa ny vokatra CBD any amin'ny fanjakana amerikana rehetra izahay afa-tsy Idaho, Wyoming ary South Dakota. Tsy alefa any amin'ireo fanjakana ireo izahay.